संयुक्त राज्य अमेरिका देखि बेलायत एक कार आयात गर्दै | मेरो कार आयात
युकेमा आयात र रेजिष्टर गर्नुहोस् हामी हरेक देश बाट वाहनहरु संग सम्झौता हाम्रो आफ्नै IVA लेन परीक्षण लेन ब्रिटेनमा परीक्षण र पंजीकरणको सब भन्दा द्रुत मार्ग अन्त्य सेवा अन्त पूर्ण बेलायत दर्ता गर्नका लागि छान्नुहोस्, हामी पूर्ण प्रक्रियालाई रोक्छौं 30 वर्ष बर्षको अनुभव ज्ञानी, व्यावसायिक र प्रभावशाली 6000०००+ कार आयात गरियो सुपरकारिबाट सुपरमनि - हामी उपयोगी छौं!
के तपाई संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट युनाइटेड किंगडममा कार आयात गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ?
हामी संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट कार आयात गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियालाई ह्याण्डल गर्दछौं, अन्तर्देशीय ट्रकिंग, निर्यात, ढुवानी, भन्सार निकासी, बेलायत इनल्यान्ड ट्रकिंग, प्रकाश रूपान्तरण, अनुपालन परीक्षण र डीवीएल दर्ता सहित। हामी तपाईको समय, परेशानी र अप्रत्याशित लागतहरू बचत गरेर सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू ह्यान्डल गर्दछौं।
Inland संयुक्त राज्य अमेरिका को कार को परिवहन
हाम्रा अमेरिकी एजेन्टहरू, जसले हामीसँग एक धेरै बलियो साझेदारी बनाएका छन, तपाईको कारको संग्रह तपाईको ठेगाना वा व्यक्तिबाट तपाईले खरीद गरेको व्यक्तिको ठेगानाबाट बुकिंगको केही दिन भित्र व्यवस्थित गर्नेछ।
तपाईंको सवारी साधनको कुनै चालको बखत, यो हाम्रो नियम र सर्तहरू अनुसार बीमा गरिएको छ। यदि तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू छन् भने सम्पर्कमा आउन नहिचकिचाउनुहोस्, तर हामी प्रत्येक वर्ष हजारौं कारहरू बिना कुनै समस्यामा सार्छौं भने कृपया निश्चय गर्नुहोस् कि हामीले विश्वस्त लॉजिस्टिक पार्टनरहरू खोज्न लामो समय व्यतीत गरेका छौं।
हामी सबै आवश्यकताहरू र बजेटहरू पूरा गर्न संलग्न वा खुला यातायात सेवाहरू प्रस्ताव गर्दछौं। हामी त्यस पछि ओकल्याण्ड, ह्युस्टन, सवाना वा न्यु योर्क, नजिकको बन्दरगाहमा गाडी ढुवानी गर्नेछौं।
कार लोड हुँदै र शिपमेंट
हाम्रो कार डिपोमा तपाईंको कारको आगमन पछि, हामी यसलाई अत्यन्त सावधानी र ध्यानको साथ यसको शिपिंग कन्टेनरमा लोड गर्नेछौं। संयुक्त राज्य अमेरिका मा जमीन मा हाम्रो एजेन्ट हैंडपिक गरीएको छ किनभने तिनीहरूको अनुभव र कार ध्यान जब विवरण मा ध्यान।
यदि तपाईं थप आश्वासनको लागि चाहानुहुन्छ, हामी समुद्री बीमा प्रस्ताव गर्दछौं जसले तपाईंको कारलाई यसको पूर्ण प्रतिस्थापन मूल्यमा समेट्छ। हाम्रो अनुभवमा, हामीसँग कुनै पनि मुद्दाहरूको कुनै समस्या छैन जसको परिणामस्वरूप ग्राहकको सवारी साधनको पूर्ण क्षति भयो।
विशेष गरी अमेरिकाबाट कारको ढुवानी गम्भिर हुन सक्छ। पश्चिम कोस्टको साथ यसले पूर्वी तट भन्दा अलि बढी समय लिन सक्दछ र हामी बुझ्दछौं कि यस समयमा तपाई यो जान्न उत्सुक हुनुहुनेछ कि यो सुरक्षित बन्दरगाहका ढोकाहरू मार्फत छ, भन्सार मार्फत सफा गरिएको छ, वा कि त हाम्रो तर्फको बाटोमा परिसर।
एक पटक तपाईंको वाहन तपाईंको हातबाट बाहिर छ भने यो रसद कम्पनीहरु संग पानी बाहिर बीमा छ। यसैले यो मानसिक शान्तिको अतिरिक्त शान्ति हो जुन हामी आशा गर्दछौं कि तपाईंलाई आफ्नो अमेरिकी कारमा बटनहरू प्रदान गर्न अलिक बढी सहज महसुस गर्न मद्दत गर्दछ।
अमेरिकाबाट बेलायतमा कार आयात गर्दा, तपाईं कम्तीमा कर निःशुल्क रूपमा गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईंसँग कम्तिमा months महिनाको लागि कार स्वामित्व गरिएको छ र १२ महिना भन्दा बढी EU बाहिर बस्नुभएको छ भने।
यदि यी मापदण्डहरू लागू भएन भने EU मा निर्मित कारहरू you 50 शुल्क र २०% VAT को अधीनमा हुनेछन्, तपाईंले कारको लागि भुक्तान गरेको रकमको आधारमा, EU बाहिर बनेकासँग १०% ड्यूटी र २०% आउँछन्। भ्याट
Cars० बर्ष भन्दा बढी उमेरका धेरै कारहरू V% आयात भ्याटको लागि योग्य हुनेछन् र आयात भइरहेको बेलामा कुनै शुल्क हुँदैन, यदि उनीहरूको मूल प्रयोगबाट उनीहरूलाई विशेष रूपमा परिमार्जन गरिएको छैन र तपाईंको दैनिक ड्राइभरको उद्देश्यले गरिएको छैन भने।
परीक्षण र संशोधनहरू
बेलायत आइपुग्दा तपाईको कार युके राजमार्ग मापदण्डमा पुग्न सुनिश्चित गर्न थुप्रै परीक्षण र संशोधनहरूको अधीनमा हुनेछ।
परिमार्जनले मुख्य रूपमा कारमा सिग्नल, कुहिर र ब्रेक लाइटमा समायोजन समावेश गर्दछ। अमेरिकाले निर्मित कारहरूमा विभिन्न र colored्गीन संकेतकहरू छन्, जुन प्राय: ब्रेक लाइट बल्बमा एकीकृत हुन्छन्। तिनीहरूसँग बिभिन्न रंगका साइड लाइटहरू पनि हुन्छन् र कारहरूमा नियमित रूपमा साइड साइड इण्डिकेटर वा फोग लाइट हुँदैन।
हामी तपाईंको कारलाई युके मापदण्डमा भर्खरको इन-हाउस एलईडी लाइट टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर रूपान्तरण गर्नेछौं, हामीलाई अत्यधिक योग्य टेक्निशियनहरूद्वारा अत्यन्त थोरै सौन्दर्य प्रभावको साथ सबै परिवर्तनहरू पूर्ण गर्न अनुमति दिदै।
अमेरिकाबाट आयात गरिएको कारहरू जुन दश बर्ष भन्दा कम उमेरका हुन्छन् त्यसपछि डिभीलाले तपाइँको दर्ता प्रमाणित गर्नु अघि IVA परीक्षण गर्नुपर्नेछ। बेलायतमा एक मात्र कम्पनीको रूपमा एक निजी रूपमा संचालित IVA टेस्टिंग लेनको साथ यात्री कारहरूको लागि डीभीएसए द्वारा अनुमोदन गरिएको हो। आयातको यस सुविधालाई पूरा गर्न लिने समय निकै छिटो हुन्छ किनकि तपाईंको कारले कहिले हाम्रो साइट छोड्नुपर्दैन र हामी सरकारी प्रतीक्षाको समयको अधीनमा छैनौं।
आईभीए टेस्ट १० बर्ष भन्दा पुरानो कारहरूको लागि आवश्यक पर्दैन, यद्यपि यो एक एमओटी पास गर्न आवश्यक पर्दछ त्यसैले स lights्केत रोशनी, टायर लगाउने, निलम्बन र ब्रेकको हिसाबले रोडवेट हुनुपर्दछ, जुन हामी अवश्य जाँच गर्नेछौं, क्रममा यूके सडकमा चालित गर्न मिल्छ।
हामीले सफलतापूर्वक हाम्रो ग्राहकहरूको लागि मेरो आफ्नै कार आयात समर्पित डीवीएलए खाता प्रबन्धकको पहुँचको लागि पैरवी गरेका छौं, यसको मतलब तपाईले आफ्नो रजिष्ट्रेसन जाँच पास गरेपछि अरु दर्ता भन्दा छिटो स्वीकृत गर्न सकिन्छ।
हामी पछाडि तपाईंको नयाँ युके नम्बर प्लेटहरू फिट गर्दछौं र कार छनौट गर्न वा तपाईंको मनपर्ने स्थानमा डेलिभरीका लागि कार तयार छ।
अमेरिकाबाट बेलायतमा कार आयात गर्न कति खर्च लाग्छ?
तपाईंको कार आयात गर्न प्रलोभन तर यसको लागत कति लाग्ने एक विचार चाहनुहुन्छ?
यदि तपाइँ संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट युनाइटेड किंगडममा तपाइँको कार आयात गर्न कती कति लागत लाग्नुहुन्छ भन्ने बारे निश्चित हुनुहुन्न भने हामी तपाईको कारको लागि उद्धरण प्रदान गर्न सक्दछौं युनाइटेड किंगडममा रेजिष्ट्रेसनदेखि संग्रह सम्म सबै चीज।
जे होस्, यदि तपाई केवल यसको लागतको बारेमा मोटा विचारको लागि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने कारको उमेरले आयात गर्न लागतमा ठूलो भूमिका खेल्छ। आयात कर तपाईले बनाउनु पर्ने पहिलो हिसाब हो जुन तपाईंलाई युनाइटेड किंगडम आगमनमा कारको सम्पूर्ण मूल्यको निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ।
सामान्यतया भन्ने हो भने, कारलाई रूपान्तरण गर्नको लागि प्राय: नयाँ कार अझ ठूलो हुन्छ विशेष गरी ती दश बर्ष भन्दा पुरानो। यद्यपि, संयुक्त राज्य अमेरिका बाट हरेक कार एक समान छैन।
हामीले क्लासिक फोर्ड मस्टangबाट सब भन्दा धेरै लाईन्फनको लाइनको नयाँ शीर्षमा आयात गरेका छौं बिस्तारै परिमार्जन गरिएको पिकअप ट्रकहरू र प्रत्येक कारलाई युनाइटेड किंगडम भित्र पालना सुनिश्चित गर्न एक अद्वितीय योजना चाहिन्छ।
यदि तपाइँ एक सही र विस्तृत उद्धरण चाहानुहुन्छ जसले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट तपाइँको कार आयात गर्ने प्रक्रियाको व्याख्या गर्दछ भने सम्पर्कमा नहिचकिचाउनुहोस्।
अमेरिकाबाट युनाइटेड किंगडममा कार आयात गर्नेबारे प्रश्न छ?
के तपाईं क्लासिक कार आयात वा अमेरिकाबाट सवारी साधनहरूको साथ सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन युनाइटेड किंगडममा पहिले नै छ?
बिल्कुल। हामी धेरै क्लासिक कारहरूसँग काम गर्छौं र सवारी संख्याको ठूलो बहुमतका लागि जुन पहिले नै युनाइटेड किंगडममा छ, हामी सहयोग गर्न सक्दछौं।
तपाईंको सवारी साधनमा निर्भर गर्दै हामी हाम्रो उद्धरणहरू परिवर्तन गर्नेछौं आधारमा दर्ताका लागि मार्ग के हो।
के तपाईं अमेरिकी प्रकाश रूपान्तरणको साथ मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ?
बिल्कुल। हामीले अनगन्ती अमेरिकी सवारी साधनहरूको साथ काम गरेका छौं र उत्पादन-जस्तो अन्त उत्पादनको लागि प्रस्ताव गर्न सक्छौं।
हामी बुझ्दछौं कि धेरै अपील ती ठूला सators्केतकहरूबाट आउँदछ जुन क्रमिक हो। किन यति धेरै वाहनहरु को लागी हामी एक धेरै bespoke प्रक्रिया प्रदान गर्दछौं।
सत्य यो हो कि कुनै पनि दुई कार एक जस्तै छैन। हामी कारलाई परिमार्जन गर्छौं कि दृश्य र भावना कायम राख्न तर तिनीहरूलाई सडक कानूनी बनाउँदछ।
हामीले धेरै फरक-फरक विधिहरू विकास गरेका छौं जुन केही अवस्थामा हाम्रा लागि अद्वितीय छन्। उदाहरणका लागि, केही कम्पनीहरूले प्रकाश मोड्युलहरू अलग गर्न छनौट गर्नेछन् जब तिनीहरूले एम्बरमा तपाईंको संकेतकहरू परिवर्तन गर्न सक्छन्। यो त्यस्तो चीज हो जुन हामीले खराब अवस्थामा परिदृश्यमा गर्छौं, तर धेरै सवारी साधनहरू लाईक लाइटिङ इकाइहरूको अखण्डतालाई हानि नगरी लाइक प्रभावको लागि परिमार्जन गर्न सकिन्छ।
के तपाई अमेरिकाबाट मोटरबाइकहरू आयात गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ?
हामीले अमेरिकाबाट धेरै किसिमका सवारी साधनहरूसँग काम गरेका छौं र मोटरबाइकहरू पनि यसको अपवाद छैन। त्यहाँ मोटरबाइकहरूको धेरै शानदार उदाहरणहरू छन् जुन अमेरिकाबाट आएका छन् (यद्यपि तिनीहरू प्राय: जसो हार्लेको हुन्) हामी कहिलेकाहीँ मालिकले किन उनीहरूलाई आयात गर्दछौं बुझ्न सक्दछौं।
मोटरबाइकहरूको लागि, हामी उद्योगमा केही उत्तम मोटरबाइक ट्रान्सपोर्टरहरूसँग काम गर्छौं सुनिश्चित गर्न को लागी त्यहाँ कुनै समस्या छैन।
के तपाइँ रेजिडेंसी अनुप्रयोगहरूको स्थानान्तरणको बारेमा सुझाव प्रस्ताव गर्नुहुन्छ?
यदि तपाईं अमेरिकाबाट युनाइटेड किंगडम सर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले आफ्नो सम्पत्ति आफैंलाई बेलायतमा ल्याउन ToR राहत योजना प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। जहाँसम्म हामी तपाईंको ToR1 फाराम पूरा गर्न सक्दैनौं, हामी तपाईंसँग भएको कुनै पनि प्रश्नहरूको साथ सहयोग प्रदान गर्न सक्दछौं।
हामी प्रत्येक वर्ष धेरै ग्राहकहरुलाई संयुक्त राज्य अमेरिका बाट बेलायत सर्न मद्दत गर्दछौं।
कृपया नोट गर्नुहोस् कि यदि तपाईं आफ्नो सवारी साधनलाई तपाईंको सम्पत्ति ढुवानीको लागि प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई त्यसो गर्न खुसी छौं। हामी बुझ्दछौं कि तपाई शिपिंगलाई भुक्तान गर्दा धेरै भन्दा धेरै ठाउँ बनाउन चाहानुहुन्छ र त्यसो गरेर तपाईले धेरै पैसा बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
के तपाई अमेरिकी सवारी साधनहरूको लागि खरीद सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ?
यदि त्यहाँ तपाईंलाई विशेष रुचिको कार छ जुन तपाईंले अझ खरीद गर्नुभएको छैन - सम्पर्कमा हुन नहिचकिचाउनुहोस्।
विदेशमा कारहरू खरीद गर्न वर्षौंको अनुभवको साथ हामी प्रक्रियामा निष्पक्ष निर्देशन दिन सक्छौं र कारको आयात लिन्छौं एक पटक तपाईंले खरीद गरे पछि।
हामी सोर्सि cars कारहरूको साथ केहि केसहरूमा सहयोग गर्न सक्दछौं जुन पाउन वा प्राप्त गर्न गाह्रो हुन सक्छ। कृपया नोट गर्नुहोस् कि यो सेवा हामी सबै कारहरूको लागि प्रस्ताव गर्दैनौं र केवल गम्भीर खरीददारहरूको लागि मात्र हो।
के तपाई अमेरिकामा सवारी साधन भुक्तान गर्न सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
यदि तपाईंले वास्तवमै कार आयात गर्नु भएन भने खरीद गर्नुभयो - जहाँ तपाईं सुरु पनि गर्नुहुन्छ।
समय लिनुहोस् कि कार वास्तवमै वास्तविक छ वा छैन। यो मोटर व्यापार मा राम्रो प्रतिष्ठा र विशेषज्ञ जो डीलरहरु संग काम गर्न लायक छ। जे होस्, यदि तपाईं पहिले नै अमेरिकामा हुनुहुन्छ र अनुहार मूल्यमा खरीद गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईं कसबाट कार किन्नुभयो भन्नेसँग अझ बढी उदार हुन सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईं विदेशबाट कार खरीद गर्दै हुनुहुन्छ? एक विश्वसनीय कार डीलर प्रयोग गर्नुहोस्।
कारलाई हेर्नुहोस् र यो सबैको राम्रो विवरण जाँच्न नडराउनुहोस्। त्यहाँ र त्यहाँ खरीद गर्न दबाब महसुस नगर्नुहोस् - किनकि त्यहाँ गाडीलाई क्षति भएको इतिहास हुन सक्छ जसले तपाईंलाई समात्न सक्छ। एकचोटि तपाई अमेरिकी कारसँग खुशी हुनुहुन्छ भने - विनिमय दरमा उतारचढावका कारण उत्तम मूल्य प्राप्त गर्न मुश्किल हुन सक्छ। दैनिक खरिदका लागि, यसले समग्र आंकडामा धेरै मामूली फरक गर्न सक्दछ तर ठूलो पूँजी खरीदको सम्बन्धमा? यो ठूलो भिन्नता हुन सक्छ। त्यहाँ धेरै कम्पनीहरू छन् जुन ब्रोकरहरूको रूपमा कार्य गर्दछन् जुन प्राय: उचित र माथिको बजार विनिमय दर प्रदान गर्दछ, तपाईको उच्च सडक बैंक भन्दा।
कारको खरीदको बारेमा छलफल गर्न सम्पर्कमा नहिचकिचाउनुहोस्।
के हामी कुनै थप परिमार्जन वा उपचारात्मक कामका लागि सहयोग गर्न सक्छौं?
तपाईंको गाडीको उमेरमा भर पर्दै सडकका लागि तयार हुनुका साथै सुरक्षित हुन आवश्यक उपचारात्मक काम हुन सक्छ।
हामी bespoke सेवा प्रस्ताव गर्दछौं। हाम्रो मेकानिक्स अनसाइट छन् र रूपान्तरण, उपचारात्मक काम, र कुनै विशेष अनुरोधहरू जुन तपाईसँग हुन सक्छ मद्दत गर्न सक्दछ।
त्यो क्लासिक कर्भेट हो जुन पूर्ण बहाली चाहिन्छ वा मस्टangलाई नयाँ ब्रेक लाइन फिटिंग चाहिन्छ।
हामी सँधै यो सोच्न चाहन्छौं कि यो राम्रो समय हो तपाईंको गाडी नहुँदा फाइदा लिनुहोस् - यो हामीसँगै हुँदा तपाईले कुनै पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंले गाडी लिनु अघि अण्डरटेकिंग गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसैले कुनै विशेष आवश्यकताहरूको साथ सम्पर्कमा नहिचकिचाउनुहोस्।
के हामी अद्वितीय सवारी साधन आयात गर्न मद्दत गर्न सक्छौं?
हामीलाई थाहा छैन कि यसले हामीलाई सवारी साधनहरूको लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट आयात कम्पनी बनाउँछ, तर हामीले एक पटक स्कूल बस आयात गर्यौं। तिनीहरू ढुवानी कन्टेनरहरूमा फिट हुँदैनन् त्यसैले तपाईं सचेत हुनुहुन्छ।
त्यसोभए हो, हामी तपाईंको लागि युनाइटेड किंगडममा विभिन्न प्रकारका सवारी साधनहरू आयात गर्न मद्दत गर्न सक्छौं।
हामीले सयौं अमेरिकी कारहरूको साथ काम गरेका छौं
अमूल्य क्लासिक्सबाट आधुनिक मास्टरपीसहरूमा रंगीन
हाम्रा ग्राहकहरूले फोर्ड र्याप्टर जस्ता एक किसिमको कारलाई ब्रांड नयाँ आधुनिक मांसपेशी कारहरूको साथ हामीलाई विश्वास गरेका छन्। तर हामी पूर्ण रूपमा आधुनिक कारहरूसँग व्यवहार गर्दैनौं, र हामी नयाँ क्लासको लागि उपलब्ध नयाँ करको मोटामोटी नियमहरूको साथसाथै उपलब्ध उत्कृष्ट कर छुटको फाइदा लिन चाहने ग्राहकहरूबाट हरेक महिना थुप्रै क्लासिक कार आयातहरू पनि गर्छौं जुन एक अमेरिकी क्लासिकलाई दर्ता गर्ने काम गर्दछ। सरल
त्यसो भए पुरानो वा नयाँ, सम्पर्कमा नहिचकिचाउनुहोस्।
तपाईंको कार डेलिभर गरियो जहाँ यो हुनु आवश्यक छ।